Sihlalutya ikhamera yeXiaomi Yi 4K + kunye nokubalulwa kwayo kwentliziyo [VIDEO] | Iindaba zeGajethi
Iikhamera zentshukumo okanye iikhamera zemidlalo Zizinto eziya zifunwa ngenxa yezizathu ezininzi, kwaye kukuba nangona zazisetyenziselwa ukurekhoda elona xesha lethu lilungileyo kwimidlalo yamanyathelo, ngoku sifumanisa ukuba ukhetho lusivumela ukuba sizenze ngaphandle kweekhamera ezinkulu phantse kuyo yonke into, kunjalo akusekho irekhodi linqabileyo lokuhamba kwethu kunye nenye yezi khamera.
Siphethe i-Xiaomi Yi 4K + yekhamera yesenzo esizisa isisombululo se-4K kunye nee-FPS ezingama-60 kwimveliso ephantse yathintela. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba iqulethwe yintoni le khamera yezemidlalo, buthini ubuthathaka bayo, kwaye zeziphi izizathu ezenza ukuba ithandwe kangaka.
Njengesiqhelo, xa uthi krwaqu nje siza kujonga ubuchwephesha obuchanekileyo ngamanani nje ukusinceda sifumane umbono malunga nemveliso esiza kuyinyanga, emva koko siza kuhlalutya imeko nganye ukuze sigqibe ngayo iziphumo zoluvo lwethu. Jonga iAmazon kwi-322 euros.
1 Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Yi 4K +
2 Uyilo, izixhobo kunye nemixholo yebhokisi
3 Ukurekhoda kunye nokufakwa kweXiaomi Yi 4K +
4 Iinkcukacha zobugcisa ekufuneka zithathelwe ingqalelo kunye nokuzimela
5 Ukulawulwa kwelizwi, usetyenziso kunye nesandi sestereo
Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Yi 4K +
Ezi ziimpawu zobugcisa Iimpawu ngokubanzi, ezinye zazo ziya kwandiswa njengoko siqhuba uhlalutyo, ke sicebisa ukuba ungaphoswa nayiphina into esiza kuyithetha ngokulandelayo malunga nale mveliso inomdla ayibeke ezandleni zethu uXiaomi.
Umzekelo Yi 4K +
Lens I-155º i-FOV ngokuvula f / 2.8
Isikrini Chukumisa ulawulo kwiscreen se-2 2 intshi
Inkqubo 2n Ambarella H14
woluvo Ziyi-377MP IMX12
Inkqubo yokulawula Chukumisa isikrini kunye neqhosha lokurekhoda kunye nolawulo lwelizwi
Isisombululo sevidiyo Ukuya kwi-4k kwividiyo H.264 kunye ne-mp4 compression ukuya kwi-135 Mbps
IsiGqibo seFoto Ukuya kwi-12 MP 4000 x 3000
Iindlela I-Slow Motion-Timelapse -Vidiyo + yeFoto kunye neLoop
Unxibelelwano WiFi Intambo yeBluetooth 4.0 kunye ne-USB-C
Ixabiso Ukusuka kwi-389 euro
Uyilo, izixhobo kunye nemixholo yebhokisi
Kwinqanaba loyilo kunye nezinto zokusebenza, uXiaomi akafunanga ukubeka emngciphekweni, phantse akukho mvelisi wolu hlobo lwemveliso ogqiba ukwenza njalo ngezizathu ezicacileyo, intuthuzelo kunye nezixhobo. Singama-65 eemilimitha ububanzi ngeemilimitha ezingama-21 ubukhulu (30 ukuba sibala ukugxila) kunye neemilimitha ezingama-42 ukuphakama. Emuva sifumana i-2,2 ″ touch screen eya kuba ngaphezulu ukwanela ukulawula isixhobo, ngelixa phezulu sineqhosha lokuqala ukurekhoda nokusimisa. Kwicala lasekhohlo kulapho sifumana irabha yokukhusela ethi, xa isuswe, isinike unxibelelwano lwe-USB-C. Okwangoku kwaye ekugqibeleni, kwicandelo elisezantsi sinesikhonkwane sabasetyhini ukuze sikwazi ukusilinganisa kwii-tripods kunye nezixhobo zendalo yonke, kunye netreyi yebhetri esivumela ukuba siyikhuphe ngokuqikelela, kunye nokufaka ikhadi le-MicroSD kwindawo slot encinci.
Indawo yokukhusela amanzi
Intambo yokutshaja ye-USB-C
I-USB-C ukuya kwi-Minijack adaptha yokubanjwa komsindo
Ukuziva ngerabha ngesakhelo sonke sekhamera, ngaphandle kwembono, enobungqingili obunamandla beplastiki kunye nescreen esishicilelweyo ngothotho lwezikwere ezincinci, uyilo olunomdla. Kule ngaphambili sifumana zombini uphawu lwe-4K + olubonisa imodeli, kunye nesalathiso se-LED sokurekhoda, le LED ikwakhona kwiqhosha lokuqala, kodwa apho iya kubonisa ezinye iiparameter ezinjengebhetri. Uyilo lungaphezulu kancinci kunesiqhelo. Mhlawumbi kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le "plastiki" inokuchaphazela into yokuba ithontsi elincinci linokuqhushumba iglasi egubungele isikrini. Sinomgangatho olungileyo wokwakha ngokubanzi.
Ukurekhoda kunye nokufakwa kweXiaomi Yi 4K +
Sinamathuba abanzi kakhulu okurekhoda kodwa sizakushiya amanye amabakala phakathi kwale khamera inakho ukuhamba, ewe ukudityaniswa kwezi paramitha kuya kuxhomekeka kwikhamera uqobo, kodwa ngale ndlela siya kuba nakho ukwenza umbono omncinci Yonke into le Yi 4K + inako ukuyenza.
Isigqibo: ukusuka kwi-420p ukuya kwi-4K Ultra
I-FPS: Ukusuka kwi-24o kwi-480p ukuya kwi-60 kwi-4K
Indawo yokujonga (i-FOV): Ububanzi, ububanzi be-Ultra, kunye nenkqubo yokudibanisa ebanzi
Isigqibo: ukusuka kwi-848 × 480 ukuya kwi-4000 × 3000
Kodwa ngaba le khamera, ayinakuba ngenye indlela, ikwanakho ukubonelela ngeziphumo ezilungileyo xa uthatha iifoto, Ukwenza oku, sebenzisa useto olulandelayo:
Ifomathi ebanzi ye12MP
Ifomathi ebanzi ye-8 MP
7 MP kwifomathi ebanzi naphakathi
5 MP kwifomathi ephakathi
Kuyo yonke le nto, isebenzisa uthotho lwezakhelo zemigaqo ekufuneka sinolwazi ngazo, kungenjalo akukho nto ilunge ngaphezu kweklasikhi imowudi ezenzekelayo "Kwiidummies" njengomhlalutyi wangoku.
Sinokuzinza ngombane Eziza kusivumela ukuba senze ushicilelo olusimahla, nangona lungazukusebenza imimangaliso kwaye kufuneka sibe nobuncinci besakhono xa sisenza izicwangciso, luya kuphucula kakhulu umgangatho womxholo ophuhlisiweyo xa siqhuba imidlalo. Kwinxalenye yayo, inqanaba lombala kunye neenkcukacha zilungile, Ukujonga ubungakanani bekhamera, akubonakali ngathi ihlangabezana neengxaki ezininzi xa siyibeka ubuso ngobuso ngeemeko ezibi ezifana nezibane zangaphambili okanye ukukhanya okungalunganga, inkqubo yayo ezenzekelayo iyazikhusela ngokukhawuleza kwaye kwiimeko ezininzi ngokufanelekileyo. Kuyahlekisa, kodwa le khamera inika iziphumo ezingcono kakhulu kunalezo zinikezelwa ngamanye amakhamera kuluhlu lwamaxabiso afanayo, ke isoftware kunye nezixhobo zehardware zisebenza kwimveliso kwaye ixabiso liyamangalisa.
Iinkcukacha zobugcisa ekufuneka zithathelwe ingqalelo kunye nokuzimela
Into yokuqala, nangona oku kungafanele ukuthandabuza kolu hlobo lweekhamera, kunjalo Gcina ukhumbula ukuba kufuneka sisebenzise ikhadi le-microSD esemgangathweni eli-10 ngokusebenza kakuhleNgaphandle koko le khamera inye iya kusithintela ekwenzeni ushicilelo oluphezulu lwesisombululo, njengaxa sisebenzisa amakhadi agciniweyo ayi-16 GB okanye ngaphantsi, inayo yonke ingqiqo ehlabathini. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le khamera inenkqubo yokhuselo lwefayile eya kuthi isivumele ukudibanisa iziqwengana ezahlukeneyo phakathi kwe-4 GB kunye ne-30 GB, eya kusivumela ukuba singasokoli ilahleko yemovie epheleleyo ngenxa yokuba icandelo lonakele, oku kuza kubunewunewu, ngokoqobo, ukunqanda izoyikiso xa kusenziwa ividiyo.
Kwelinye icala, ukuba siyafuna, Kuya kufuneka sikhumbule ukuba sine-USB-C, Ukuba siyisebenzisa kugcino lomxholo, iya kusinika isantya sokuhambisa esingekho ngaphantsi kwe-40 MB / s, ephezulu kakhulu kunaleyo inikezelwa zizixhobo ezikhuphisanayo kuluhlu lwamaxabiso afanayo. Kwinqanaba lokuzimela sine I-1.400 mAh ibhetri esinika phantse iiyure ezimbini zokurekhoda kwisisombululo se-2K, esihlala kancinci kancinci kuxhomekeke kwimisebenzi eyenziweyo.
Ukulawulwa kwelizwi, usetyenziso kunye nesandi sestereo
Kwiinguqulelo zokuqala uhlaziyo lwaluyimfuneko kwaye lwalusebenza ngesiNgesi kuphela, nangona kunjalo ingxelo esiyifumeneyo sele ihlaziyiwe, ke, lixesha lokuba sithethe ngenkqubo yolawulo lwelizwi. Iyaxatyiswa kodwa ayisiyiyo kuphela isixhobo seXiaomi esiyenzayo, umzekelo i-Vacuum esele inolawulo lwezwi. Ngokwenza oku kulungiswa siya kuba nakho ukwenza imisebenzi elula ngaphandle kokuchukumisa ikhamera, Oku kuyabulelwa xa siqhuba imidlalo okanye sikhawulezile nje. Singakuxelela, umzekelo, ukuqala ukurekhoda ividiyo okanye ukuthatha ifoto, nangona kunjalo, njengoko kulindelekile, ukubanjwa kwemakrofoni kubaluleke kakhulu ukwenza lo msebenzi, kwaye kwiimeko ezininzi, asinakho. Ngokwenxalenye yayo, isicelo yinto onokuyilindela, iyahambelana ne-iOS kunye ne-Android eneempawu ezifanelekileyo zokurekhoda, ukuthatha imifanekiso kunye nokudibanisa bukhoma kwinethiwekhi ye-WiFi esasazwa yikhamera.
Ngakolunye uhlangothi, Sineadaptha efakwe ebhokisini eya kusivumela ukuba songe ii-microphone, ngale nto siya kuba nakho ukufaka isandi kwistereo, Lo msebenzi uyafumaneka kwiselfowuni yesizukulwana esilandelayo njenge-iPhone XS, kodwa iyaxatyiswa ngohlobo lomxholo esiza kuwubamba ngale khamera. Kucacile ukuba xa sibeka imeko ekhuselayo kumgangatho wokurekhodwa komsindo (ongalunganga ngokubanzi) uwela kakhulu, nangona kunjalo, sinokongeza naluphi na uhlobo lombhobho ngonxibelelwano lwe-USB-C ukufumana iziphumo ezingcono, ezinje ngezi ukufaka isandi kwistereo.
Umxholo omncinci webhokisi
Lixesha lokuba uthethe ngeyona khamera imbi kakhulu, apho sihlala siqala khona. Kwindawo yokuqala ndingathanda ukuqaqambisa, nangona ayisiyonto imbi kwaphela, inyani yokuba iplastikhi yesakhelo ibonakala ngathi ibhetyebhetye ebusweni bokuwa okunokwenzeka okuchaphazela isikrini. Ngokwenxalenye yayo, iXiaomi khange ibeke emngciphekweni kwaphela kuyilo, kwaye ihlala isishiya sinencasa embi emilonyeni yethu. Ibhetri yenxalenye yayo ikwaphantsi kancinci kunaleyo yokhuphiswano lweemveliso, ewe, ixabiso liyicacisa ngokucacileyo.
Isenzi kunye nokurekhoda
Useto kunye nokuchukumisa isikrini
Eyona nto sayithanda kakhulu yekhamera yinyani yokuba inamathuba angenasiphelo kunye nokurekhoda useto kunye nomgangatho weefoto. Umsonto osemazantsi ulongezo olwamkelekileyo ukunqanda iingxaki ngezixhobo kunye nescreen sokuchukumisa esasithanda nje, le khamera inezinto ezininzi ezilungileyo.
Sihlalutya ikhamera yeXiaomi Yi 4K +
Ngamafutshane eLukhetho oluvela kwi-322 euro kwiAmazon Oko ziimpawu ngokucacileyo ezingaphezulu kwezo zinikezelwa ngezinye iindlela ezinjengeGoPro malunga nee-euro ezingama-120 ngaphezulu. Koko kukuthi, Ukuba into oyifunayo isiphelo esiphezulu kunye nexabiso elifanelekileyo lemali kwiikhamera zezemidlalo, ndingathi le Yi 4K + ngokuqinisekileyo yeyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya ikhamera yeXiaomi Yi 4K + kunye nokubalulwa kwayo kwentliziyo [VIDEO]
Ungabunciphisa njani ubunzima beefoto